सेयर बजारबाट कसरी कमाउने ? चितवनमा शनिबार हुँदैछ विशेष तालिम !
ARCHIVE, MUDRA MAMILA » सेयर बजारबाट कसरी कमाउने ? चितवनमा शनिबार हुँदैछ विशेष तालिम !
काठमाडौँ - चितवनमा सेयर बजारसम्बन्धि विशेष तालिमको आयोजना हुने भएको छ । २०७४ साल असार ३ गते शनिबार विहान ९:३० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म उक्त कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको हो । क्यापिटलप्लसको आयोजनामा हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा सेयर बजार के हो ? सेयर बजारका फाइदा तथा जोखिमहरु के के हुन् ? सेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने लगायतका कुराहरुमाथि विशेष चर्चा हुनेछ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन १५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
होटल रेड कार्पेट, चितवनमा हुन लागेको उक्त कार्यक्रमको लागि तालिम प्रदायकहरु चितवन प्रस्त्थान गरिसकेका छन् । थ्री एस इन्भेष्टमेन्ट, धीतोपत्र डटकम, नेप्सेसंसार लगायतले समेत सहकार्य गरेको उक्त कार्यक्रममा अर्थ सरोकार डटकम मिडिया पार्टनरको रुपमा रहनेछ ।
बाँकी जानकारी तलको तस्विरमा हेर्नुहोस् :
प्रकाशित : Friday, June 16, 2017